Roulette yengxoxo yevidiyo. Zonke izingxoxo zevidiyo kwindawo enye
Ukukhathalela wena, senze i-roulette yencoko efanelekileyo! Indawo yethu isetyenziswa ngamawakawaka abemi bomhlaba. Ukuze usijoyine, ufuna ikhompyuter kuphela ngekhamera kunye nokufikelela kwi-Intanethi. Emva kokubhalisa, ungaqala ukukhangela umntu oza kunxibelelana naye ukuze unxibelelane naye. Ingxoxo yevidiyo iya kumema amawaka abantu ukuba baxoxe. Uyakwazi ukufumana abahlobo abatsha okanye uthande ngokusebenzisa umgaqo we roulette Nceda uncede, wazi kwaye ulandele imigaqo yethu yokusebenzisa inkonzo. Yenzelwe intuthuzelo yonxibelelwano.
Kule ndawo sizamile ukuqokelela zonke izingxoxo zevidiyo zeharoulette ezingadingi kubhaliswa. Injongo yethu yayikukubonisa iihits ezifana neChatroulette. Okanye, njengoko sikubiza ngokuba yingxoxo yaseRussia, ingxoxo. Inkonzo yokuthandana inamagama amaninzi afanayo. Wonke umntu uya kuzifumanela isihloko esifanelekileyo sencoko. Apha ungancokola nje, ufumane umhlobo okanye intombi. Qala ulwalamano olunzulu okanye uzikhawulele kwikhamera yewebhu ebonakalayo. Ngenxa yoku, sigqibe kwelokuba ndibonise iingxoxo ezahlukeneyo kunye nomngeneleli ongacwangciswanga. Ewe, sinamagumbi okuxoxa kunye nomxholo ophandle. Ukuba ungaphezulu kweminyaka eli-18 ubudala, emva koko ungaya kule ngxoxo ukuze uzifumanele iqabane elingenantanga.
Zonke izingxoxo zevidiyo eRashiya nakwihlabathi.
Ngokuya kuyo nayiphi na incoko yevidiyo engahleliyo ebekwe kwiwebhusayithi yethu, unokuzifumanela ngokulula abantu abanomdla kuzo. Unxibelelanisi unokuba ngubani na. Indlela abantu abeza ngayo kuthi bevela kumazwe ahlukeneyo. Kungenxa yokuba izingxoxo ezaziwa kakhulu kwihlabathi ziqokelelwe apha.
Amazwe aphambili ngala: United States, Jamani, Spain, Rashiya, Ukraine, France.
Sizamile ukuqokelela phantse zonke izingxoxo zevidiyo apho ubhaliso lunganyanzelekanga okanye lusesikweni. Kungenxa yoko le nto singakhange siyipapashe i-Chatroulette yoqobo. I-roulette yengxoxo ifuna ukubhaliswa, kunye nemithetho engqongqo, kunye nayo yonke into eyenzeka apho ngesiseko esihlawulelweyo.
Incoko yevidiyo yenzelwe ukuthandana kunye nonxibelelwano. Yenziwe kumgaqo weRussia roulette, yiyo loo nto igama "Ingxoxo yeVidiyo yeRoulette". Ukhetha isinxibelelanisi ngokushukuma kwincoko ye-roulette, emva koko uyimise kwisinxibelelanisi esikhethwe ngokungacwangciswanga.Thetha nalowo uphume ngeli xesha okanye uqalise incoko kwakhona. I-chat roulette inomdla kakhulu. Ungadibana nabantu abaninzi ngorhatya olunye. Fumana iindaba zakutshanje mathupha. Kukho inyani enye, ukuba ufuna ukunxibelelana nabantu abavela kumazwe ahlukeneyo, kuya kufuneka ufunde isiNgesi ubuncinci. Kwaye abo bayifundayo nje, ukuncokola ngevidiyo kuya kuba yinto eyongezelelweyo yokuziqhelanisa nolwimi. Unokufunda kwaye wenze naluphi na ulwimi lwangaphandle. Ayinamsebenzi kuye nabani na onokufunda kuphela ulwimi lwabo lweenkobe. IRashiya inkulu, kwaye abantu abathetha isiRashiya bakhulu nangakumbi!Kwisiza oza kufumana kuso ukuba ungachitha nabani na ngokuhlwa. Umbuzo: Ungathandwa njani kwiVideochat uze uthandwe? Impendulo: ukuziqhelanisa nokwenza ngakumbi! Apha kuya kufuneka uqonde ukuba ngubani kwaye nini xa ufuna ukuthetha, kwaye apho kufuneka uthule khona, apho ungaqhula khona, kwaye phi ukunika iingcebiso ezifanelekileyo nezizizo. Mphathe kakuhle umntu othetha naye, nokuba awucwangcisi ukunxibelelana naye ngakumbi. Landela imigaqo yokuziphatha okuhle. Uyakonwabela ukufumana ukuthandwa kwincoko. Ukudibana "nekamva lakho" kwincoko yevidiyo-yintsomi okanye yinyani?Uyakonwabela ukufumana ukuthandwa kwincoko. Ukudibana "nekamva lakho" kwincoko yevidiyo-yintsomi okanye yinyani?Uyakonwabela ukufumana ukuthandwa kwincoko. Ukudibana "nekamva lakho" kwincoko yevidiyo-yintsomi okanye yinyani?
Ingxoxo yevidiyo-iimpawu zonxibelelwano
Abafana kunye namantombazana aphuma kumazwe ahlukeneyo bafuna i-interlocutor enomdla apha, iqabane labo lomphefumlo, okanye incoko yasimahla yevidiyo. Rhoqo, bafumana isinxibelelanisi sabo kwivili le roulette, ikwabizwa ngokuba yingxoxo. Ngendlela, andiyi kukulibala ukukhankanya ukuba sineencoko zasimahla zaseRussia. Zonke izingxoxo zevidiyo kwindawo enyeukuze ukwazi ukunxibelelana nabantu abohlukeneyo simahla kwaye ngaphandle kokubhalisa. Ingxoxo ithathwa njengeyona nkonzo ithandwayo, kodwa ikude kweyona ilungileyo. IChatroulette.com ineentlobo ezininzi. Kwaye ngamanye amaxesha azikho ngaphantsi kuye kumgangatho nakwinani labangeneleli. Kukho i-analogue yeChatroulette eRashiya, kwaye isimahla. Ndingathanda ukunqwenela unxibelelwano oluhle kunye nabafana abahle kunye namantombazana. Ngoku kukho iimeko ezininzi xa isibini esitshatileyo, sithetha ngabantu esibaziyo, sithi: "Sadibana kwi-Intanethi." Ewe bayazana, emva koko badibana kwilizwe lokwenyani, emva koko batshata kwaye bahlala kunye. Konke oku kuyinyani! Amabali ayinyani abantu bokwenyani! Nawe, ungadibana ngempazamo neqabane lakho lomphefumlo okanye uqale ukumkhangela. Ungathandabuzi- akukho mntu uya kukualuma apha ngekhamera. Yenza imeko efanelekileyo yokuba unxibelelanisi aqondeukuba uzimisele.
Bhalisa kwincoko yevidiyo ukuze uchithe ubusuku obunomdla apho. Apha unokuzihlaziya ngaphandle kokushiya ikhaya lakho ngaphandle kokuchitha imali. Uya kuba nabantu abatsha obaqhelileyo, incoko enomdla, uya kuzazi iindaba zamva nje. Kutheni le nto uhlala ngobudenge phambi kweTV ubusuku bonke xa uthetha nabantu bokwenyani? Ewe, ngaphandle kwemozulu kubi, kodwa ngamanye amaxesha akukho mandla emva komsebenzi, kwaye incoko yevidiyo iya kunceda apha. Esoloko ikufuphi kwaye amakhulu amawaka abantu sele ekulungele ukunxibelelana nawe! Ngethamsanqa kunxibelelwano nakwabanomdla obaziyo!
Ukuncokola ngevidiyo eMoscow
Ndingathanda ukwazisa ngenkonzo entsha yokuthandana kubahlali baseMoscow nakwingingqi yaseMoscow. Roulette yengxoxo yevidiyo kukunxibelelana ngekhamera yewebhu. Phambi kwakho ngoyena mntu unxibelelana naye.
Abafana kunye namantombazana bayayazi inzuzo yengxoxo yevidiyo. Ilele kwinto yokuba awuyithengi ihagu kwindawo yokubambisa. Ndadibana nomntu engxoxweni kwaye imbalelwano yakho ihlala iinyanga. Nitshintshiselana ngeefoto, nichitha ixesha kunye. Kwaye ixesha yeyona nto ixabisekileyo sinayo. Xa kufika ixesha lokuhlangana, ubuncinci awusoloko ufumana oko ubuthenjisiwe. Kwaye abahlobo kamva bathi le ifoto yemodeli ethile yaseNorway. Sikunika ingxoxo yevidiyo yaseMoscow yokuthandana kwamantombazana kunye nabafana. Ngoku ungasebenzisa iinkonzo zencoko yevidiyo eyinkunzi. Khangela amaphepha ethu.
Namhlanje, abantu abaninzi bayazana, banxibelelana, benze abahlobo kwaye baqale ubudlelwane obukhulu, badibana phantse. Kulula ngaloo ndlela. Indoda ethozamileyo isenokungayazi intombi yayo, kodwa ke, imida emininzi iyacinywa, ukungoyiki, nokuzithemba ngakumbi. Incoko yevidiyo ayibandakanyi kuphela ukunxibelelana ngomlomo, kodwa ikwenyani yokuba uya kubonakala ngamehlo akho, uthathelwa ingqalelo, kuvavanywa njengoko ungumlamli wakho. Zama ukwenza ucwangco kwigumbi lakho. Guqula inkangeleko ukuze unomdla kwi-interlocutor. Kule meko, izixhobo ngesihloko endifuna ukuthetha ngaso ziya kunceda. Mhlawumbi akukho mnqweno wokubonwa. Kule meko, unokuguqula ukuze kungabikho mntu ukuqondayo. Okanye sebenzisa izicelo ezizodwa zokulungisa eziza kukunceda utshintshe okanye ubambe imbonakalo yakho.
Ukwenza lula kwaye kube lula kunxibelelwano kwi-Intanethi, sinike zonke izingxoxo zevidiyo sisebenzisa umgaqo weeroulette kwisiza esinye. Ke unxibelelwano luya kufikeleleka ngakumbi kwaye kube lula kubantu abaninzi abafuna ama-interlocutors.
I-chat roulette yaqanjwa malunga neminyaka emi-5 eyadlulayo. Olu hlobo lokukhangela abahlobo lufumana ukuthandwa kuphela. Kukho iintlobo ezingakumbi nangakumbi zeencoko zevidiyo minyaka le. Yiyo le nto esenza ukuba siqokelele ezona sampuli zinomdla wokuzonwabisa.
Incoko yevidiyo ityelelwe ngamawakawaka abantu abavela kumazwe ahlukeneyo. Imigaqo yokusetyenziswa ilula kakhulu, ke ukuphunyezwa kwayo akuyi kubangela ukungathandeki. Incoko yevidiyo yenziwa kusetyenziswa umgaqo wokukhetha ngokungakhethiyo womngeneleli. Ke ngoko, kwathiwa: Chatroulette, kwaye ngesiRashiya- "incoko yokuxoxa". Kwanele ukuba ube nekhamera yewebhu, ixesha elincinci kunye neemeko zokunxibelelana kwizihloko ezahlukeneyo.
Imvelaphi yengxoxo yevidiyo ye-roulette ivela eMoscow, apho umenzi wayo wayekhe wahlala khona. Ngoku lonke ilizwe ubuncinci inye, ingxoxo yayo eyi-analogue yeChatroulette. Kwezinye iintlobo zeeroulettes, unokucoca ngesini, umzekelo, ngokukhetha amantombazana kuphela.
Kuluntu, i-Intanethi ibaluleke kakhulu. Abantu bahlala bekhetha unxibelelwano olubonakalayo kunokuhlala kunxibelelwano. Umnqweno wabo uyaqondakala. Xa unxibelelana, umzekelo, nge-webcam, kulula kakhulu ukutshintsha umngeneleli ukuba ngasizathu sithile akahambelani naye. Ndicinezele iqhosha "ngokulandelayo" kwaye kukho into engenayo entsha phambi kwakho. Yiyo le nto incoko yevidiyo yeenkulumbuso inyoba abalandeli bayo.
Ukuthandana kwi-roulette yencoko kuye kwaba yinto eqhelekileyo. Abantu bayazana, emva koko batyelelane. Kwabaninzi, uthando lwenyani yindlela entsha yokubalisa. Kwaye kwabanye, yindlela nje yokudlulisa ixesha kunye nokwenza amanye amalungu.
Incoko yeRoulette yokuBambisana
Ingxoxo yevidiyo iRoulette 18+ -iya kuba yeyona ndlela iphambili yokuphumla nakwabona bantu baxakekileyo. Ukuba unexesha elincinci ukhululekile kwaye unomdla wokuthandana, ke ungaphoswa lithuba lokuzama incoko yethu ekwi-intanethi, apho ngamanye amaxesha kwenzeka izinto ezimnandi kakhulu. Nokuba ungashiyanga khaya, ulele kwisofa esitofotofo, unokuzifumana ungumnxibelelanisi onomdla. Ngabaphulaphuli abaninzi babasebenzisi, uya kuhlala unezinto ezahlukeneyo. Khetha inkanuko entsha kwi-intanethi ngokwakho yonke imihla kwaye ungadikwa.
Isini Roulette: Iimfihlo zoNxibelelwano
Akuyomfihlo ukuba unxibelelwano ngesihloko lelinye lamaxabiso aphezulu kuye nawuphi na umntu. Ngaphandle konxibelelwano kwikhamera yewebhu, akukho nkqubela phambili ekukhuleni okusondeleyo, unxibelelwano lokwenyani nabantu besini esahlukileyo kwi-intanethi lunceda ukusombulula iingxaki ezininzi, ukuba nexesha elimnandi kunye, kwaye liyinxalenye ebalulekileyo yomsebenzi wethu, isifundo kunye nobomi bobuqu.
Xoxa neqabane elingahleliyo ukuze usondelelane
Ubomi obusondeleyo kule mihla yinto enzima kakhulu. Abantu abatsha, bezabalazela ukuzenzela umsebenzi olungileyo, ngamanye amaxesha bayalibala ukuzenzela ubomi kwaye benze izihlobo, bengenalo ixesha lokuqalisa usapho kwaye babukele rhoqo. uphumle ngokwenyani kwaye uphumle. Ukuba isizungu singena endleleni, uneentloni zokuthandana ngobomi bokwenyani, lixesha lokuba ufumane i-roulette yengxoxo yevidiyo emangalisayo kunye neqabane eliqhelekileyo lobuhlobo .Apha, ukuthandana nge-18 + kwi-Intanethi kulula kakhulu, kuba wonke umntu ombonayo kwelinye icala lesikrini unomdla kunxibelelwano olunomdla nakwabaqhelana nabo abatsha, uninzi luye nje kwi-roulette ukuze lubaleke lujongane ngqo emehlweni lusebenzisa iwebcam. Inani elikhulu labantu beentlobo ngeentlobo zokungcamla kunye nemibala iya kwenza kube lula ukufumana isinxibelelanisi osithandayo kunye nencoko emnandi enomdla naye okanye ngokulula.Uninzi oluzamile ukuthandana kwi-webcam engxoxweni sele lufumene abahlobo abatsha abathembekileyo abavela kumazwe ahlukeneyo kwaye bafumana iqabane lomphefumlo. Musa ukuchitha ixesha lakho, ngena nje kwaye wonwabe, uphelisa isithukuthezi ngonaphakade.
Abantu abaninzi bakhetha i-roulette yethu yengxoxo yevidiyo kwaye nantsi isizathu:
-Ilula kwaye kwangaxeshanye inika umdla ukuthandana ukusondelelana-Inani elikhulu labantu lihlala livulekele iincoko ezinomdla ngesihloko-Elona thuba lihle lokuncokola ngokungaziwa, xa kungekho mntu uya kukuqonda kwaye abuze malunga nomntu wakho-Fumana ilizwe langaphandle Abahlobo kunye nokuba liqabane lomphefumlo rhoqo kwi-webcam okanye uphile- Elonathuba lihle lokususa iintloni, funda ukunxibelelana nabantu besini esahlukileyo kwimowudi ephilayo-Ithuba elinokufikeleleka lokunxibelelana ngonxibelelwano lwevidiyo ngexesha lokwenyani ngenani elingenamda yabantu, khetha isini kunye neminqweno esondeleyo yomngeneleli okanye wongenelelo
Iroulette yabantu abadala -Fumanisa unxibelelwano olufikelelekayo kwifomathi entsha!
Ixesha sele lidlulile xa saqhelana noncedo lweSMS ngee-emoticons ezipholileyo kunye nemifanekiso. Ifomathi yokubhaliweyo ilungile, kodwa ikwanazo neengxaki zayo. Xa unxibelelana ne-interlocutor ebonakalayo, ngekhe uqiniseke ngobuntu bakhe bokwenyani. Iiakhawunti zenkohliso zenza abantu abaninzi badane kunxibelelwano.Ukuqhelana neWebcam yewebhu kunye nabantu abangaqhelekanga abakulungeleyo ukuhamba ze, nangona kunjalo, awubandakanyi kwaphela lo mzuzu. Enkosi kunxibelelwano lwevidiyo, abasebenzisi bencoko ye roulette babonana ngexesha lokwenyani kwaye babonisa iimvakalelo ezinyanisekileyo ngexesha lencoko. Le yiyo yonke le fomathi intsha yokuthandana kwi-intanethi enika imbonakalo eyahlukileyo yomntu kwaye ikuvumela ukuba umazi ngcono.
Unxibelelwano yenye yeemfuno zomntu ezibalulekileyo. Ingxoxo yeRoulette yindlela ekhululekile kunye netekhnoloji yokunxibelelana nabantu abaninzi abanomdla abavela kwihlabathi liphela ngonxibelelwano lwevidiyo. Iprojekthi idibanisa amawaka abasebenzisi kwaye ikwimeko yophuhliso rhoqo ukwenza unxibelelwano lwakho lube lula, luqaqambe kwaye lunomdla.
I-roulette yencoko ngeendlela ezininzi igqitha ukubanakho kweencoko eziqhelekileyo, ivumela abo banxibelelana ukuba banxibelelane ubuso ngobuso, endaweni yembalelwano eyomileyo nengabonakaliyo. Ukuba awunasisebenzisi esithile engqondweni, ungasoloko ufumana iqabane olithandayo ngokuskrola kubasebenzisi abakwi-intanethi okwangoku. Kungoko igama lencoko-roulette, kuba kuhlala kukho into emangazayo (ngekhe wazi ukuba ngubani oza kumfumana kwiwindow elandelayo).
Unxibelelwano kwindawo leyo, ukuba lunqweneleka, lunokungaziwa ngokupheleleyo, ke abasebenzisi banokuziphatha ngendlela ekhululekile (ngaphandle kwesizathu, kunjalo), ngaphandle kokukhathazeka malunga nokuba uluntu luza kuthini ngabo. Kwezinye iincoko kwi-roulette, ikhubalo lomntu lokwenyani liyatyhilwa, uzibonakalisa njengoko enjalo, nto leyo engasoloko ikwenza nkqu nakubantu abasondeleyo.
I-chat roulette ibonelela abasebenzisi ngamathuba awodwa onxibelelwano kwaye inezibonelelo ezininzi ezibonakalayo ngaphezulu kweenkonzo eziqhelekileyo ze-Intanethi.
I-chat roulette ilula
Ukuqala ukunxibelelana, akukho mfuneko yokuba ungene kubhaliso oluntsonkothileyo. Kwanele ukuvula ikhamera yewebhu kwaye ucofe iqhosha u "Fumana iqabane". Yonke into isebenza simahla, akukho misebenzi ifihliweyo kwindawo leyo. Iqabane lonxibelelwano liya kuqhagamshela phantse kwangoko, ngaphandle koko, ukuthandwa kwenkonzo kuyakhula yonke imihla kunye nesiseko sabasebenzisi abatsha. I-chat roulette yindlela elula nekhuselekileyo yokuhlangana nabantu abatsha mihla le.
Lula kunye nesantya ukuthandana
Uninzi lwabantu lukufumanisa kunzima ukuya kumntu esitratweni kwaye bacele ukudibana, ngakumbi nommeli wesini esahlukileyo. Le yindlela esilungelelaniswe ngayo-ayinguye wonke umntu onikwa ubukrelekrele, kwaye uninzi lweetaboos zentlalo zenza abantu bangabazi omnye komnye. Ukuvela konxibelelwano kube lula kwinkqubo yokuthandana, kodwa khange kuyisombulule ingxaki - uninzi lwabasebenzisi banxibelelana apho ngesangqa esicacileyo sabahlobo babo kunye nabantu ababaziyo kubomi bokwenyani, kwaye balumkele izindululo ezitsha. Kwi-chat roulette, imeko yahluke ngokupheleleyo -abasebenzisi bangena ngenjongo ethile yokuhlangana kunye nokunxibelelana nabantu ukuza kuthi ga ngoku abangaziwa ngonxibelelwano lwevidiyo. Kulula kakhulu ukwenza ukwazana okunomdla kunye nomntu ongene kunxibelelwano.
Ukuvalelisa kulula njengokwazi umntu othile
Umntu ngamnye ngumntu-ngokokuthanda, ukhetho, ubushushu, isimilo. Rhoqo umbono wokuqala uyakhohlisa, kwaye umntu omaziyo omtsha akanguye lowo ufunwa kunxibelelwano olunomdla. Kwimeko yokuhlangana esitratweni okanye kwezentlalo. uthungelwano, unokufumana kuphela ngomhla wokuqala, kwaye ukuze wahlukane nomntu ongalunganga kuya kufuneka ulungiselele incoko engathandekiyo. Kwi roulette yencoko, cofa nje ku "Okulandelayo" iqhosha, kwaye kwisibini esilandelayo uza kudibana nomngeneleli omtsha.
Ukunxibelelana kwi-Intanethi kulula ngakumbi ngekhamera yewebhu
Akukho ndawo yokubonana inokuqonda umntu ngokukhawuleza kunxibelelwano lwevidiyo. Ngokufika kwengxoxo ye-roulette, akusekho ndawo yokuchitha ixesha kwimbalelwano eyomileyo neyindinisa, kuba ungabona kwangoko umntu omtsha omaziyo uhlala. Ukongeza, kukho inani elikhulu labakhohlisi kwinethiwekhi abazenza abo babanye, besebenzisa iiakhawunti ezingezizo kunye nedatha yabanye abantu kunye neefoto. Kwincoko yevidiyo, le ndlela yokuziphatha ayifakwanga - akunakwenzeka ukuba ubuxoki ngevidiyo ngexesha lokwenyani.
Ukhuselekile kwaye uzolile
Imigaqo yokusebenzisa ingxoxo yevidiyo ilawulwa ngokungqongqo, kwaye isimilo esingafanelekanga sohlwaywa ngokuqatha. Umntu okrwada kwabanye abasebenzisi kwaye ngandlela zonke enokwaphula imigaqo yoluntu yesimilo kungekudala uza kuvalwa ngumlawuli. Uninzi lwabasebenzisi benkonzo banethemba, banobubele kwaye banengqondo evulekileyo. Ukuba awumthandi umntu-jika i-roulette ebonakalayo ujonge kulwalamano olutsha olunomdla!
Yithi "Hayi!" ubulolo
Ukuba uziva ulilolo, kwaye akukho mntu ukufutshane onokuncokola naye, ke ungazami ukuba mope. Vula i-roulette yencoko kwaye uncokole kumnandi wakho. Abasebenzisi abaninzi baqaphela ukuba emva kwemizuzu embalwa yokuncokola ngevidiyo nabantu abahlukeneyo, akukho namnye umkhondo wosizi oludala. Kwaye ukungaziwa kwabasebenzisi kunye nokugcinwa kwemfihlo kunxibelelwano kukuvumela ukuba wabelane ngeyona nto isondeleyo nabantu obaziyo kwaye wonwabe ukunxibelelana ngaphandle kokushiya ikhaya lakho.
Ngena kwilizwe lonxibelelwano olonwabisayo nengxoxo yevidiyo ekwi-Intanethi uVichatter
Yiza ngapha eWichatter! Apha uya kuba nonxibelelwano oluphila kunye namawaka wabo, abafana nawe, abaphupha ngezinto ezinomdla. Vele uvule ikhamera kwaye wonwabele ulwandle lweemvakalelo ezintle nolonwabisayo ngoku!
Khawufane ucinge xa ​​unokwazi ukunxibelelana nabantu abavela kwihlabathi lonke! Unokukhetha nayiphi na ifomathi yonxibelelwano. Imiyalezo yabucala? Umnxeba wevidiyo? Konke kusezandleni zakho. Zama incoko yevidiyo yasimahla ngaphandle kobhaliso, kwaye ukuba ngequbuliso uyakhathala ngekhamera, yicime kwaye ubukele okwenziwa ngabanye! Inomdla? Kusenokwenzeka! Bhalisa kwaye ujoyine amanani abo sele belonwabela ixesha labo eVichatter.
Usajonge imifanekiso kunye nokuthumela imiyalezo?
Kodwa nabantu bokwenyani kumnandi ngakumbi! Okwangoku, joyina ingxoxo yevidiyo enemibala evela kwihlabathi liphela. Qhagamshela ukuncokola wedwa okanye nabahlobo. Khanyisa ikhamera kwaye uzibonakalise! Okanye ungenza ngaphandle kwakhe: khawufane ucinge, kuba abanye benu abaniboni. Jonga into abaya kuyo kwingxoxo yevidiyo yeWichatter!
Amathuba amaninzi ngekhamera kunye nemakrofoni
Ngaba unayo nayiphi na italente? Khawulezisa uxele ngayo! Endaweni yoko vula ikhamera kwaye wenze umboniso wevidiyo yakho, wothuka, ufumane amanqaku, amabhaso, kunye nenqanaba labanye abathathi-nxaxheba. Yiba yinkwenkwezi ye-Intanethi, kulula kakhulu kwaye ilula ngesicelo seengxoxo zevidiyo eshukumayo.
Dlala kwaye uphumelele
Dibanisa unxibelelwano ngoku kunye nemfuno ebukhoma enomdla!
Ukuhamba kumacandelo ahlukeneyo evidiyo yenethiwekhi yoluntu kunye nokubukela usasazo olunomdla lwevidiyo, unokuqokelela izipho kunye nempumelelo epheleleyo. Vavanya iitalente zabanye abathathi-nxaxheba kwaye ubonise ezakho. Zuza ukuthandwa kwaye ufumane ababhalisile. Kwaye ukuba awumthandi umntu -jongana naye usebenzisa "amandla amakhulu"!
Incoko roulette. Zonke izingxoxo zevidiyo
I-roulette yengxoxo yevidiyo yenzelwe unxibelelwano phakathi kwabasebenzisi be-Intanethi abathetha isiRashiya. Unxibelelwano kwikhamera yewebhu lwenziwa ngokungahleliwe. Zininzi iindidi zazo kwikhathalogu yethu yengxoxo yevidiyo. Uhlala unezinto ezininzi onokukhetha kuzo.
Ingxoxo yeRoulette yindlela yonxibelelwano kubasebenzisi abathetha isiRashiya abavela kwihlabathi liphela. Ewe, incoko yethu kwi-Intanethi ityelelwa ngabafana kunye namantombazana aseRussia nakwikomkhulu layo iMoscow. Kwaye nakwikomkhulu elikumantla, elibizwa ngokuba yiSt.
Kodwa ngaphandle koko, abantu abavela kumazwe ahlukeneyo basebenzisa incoko. Abona bathungelwano baphambili ngabantu abavela kumazwe anje nge: Russia, Ukraine, Belarus, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Latvia, Lithuania, Estonia, Armenia, Azerbaijan, Georgia ne Kyrgyzstan.
Yintoni incoko yevidiyo kunye neqabane elingahleliwe? Asinto intsha nje kuphela ebantwini, kodwa unxibelelwano olupheleleyo, kunye nokutshintshiselana ngolwazi nabo bakude kakhulu. Ungathetha ngentliziyo entliziyweni okanye uxele ihlaya. Chaza uthando lwakho kubuhle odibana nabo. Kutheni intle? Angangubani omnye umntu? Ewe, phakathi kwamantombazana aseRussia akunakufane ufumane entle. Kodwa, amantombazana aseRussia onke asisihloko esahlukileyo. Ingxoxo yevidiyo yeRoulette, esekwe kumgaqo wokukhangelwa okungahleliwe komntu othetha naye, ngokukhawuleza yaphumelela iintliziyo zabantu. Yintoni oyifunayo ukuqala incoko ngekhamera yewebhu kunye nemakrofoni? Okokuqala, yiya kwindawo yethu, kuba kuphela ikhathalogu yeenkonzo zasimahla zonxibelelwano. Inyathelo elilandelayo kukuvula ikhamera yewebhu, uyiqwalasele. Emva kwayo yonke le nto, cinezela QALA iqhosha. Incoko yevidiyo iqalile.
Ngalo lonke ixesha isinxibelelanisi siza kuqhagamshela kuwe. Kuxhomekeke kuwe ukuba unomdla kuyo okanye akunjalo. Umlamli okhethwe yityala. I-Bongakams kwi-Intanethi yenzelwe ngendlela yokuba ungazi kwangaphambili ukuba ngubani oza kuba ngumlamli olandelayo.
Roulette yengxoxo yevidiyo 18
Roulette yengxoxo yevidiyo yingxoxo yewebhu yewebhu. Wonke umntu ongamaziyo kwingxoxo ye-roulette uneemeko ezifanayo. Unelungelo lokuphazamisa unxibelelwano nawe kwikhamera yewebhu. Ke ngoko, akufuneki wenze izinto ngokungxama. Emva kokudibanisa, kuyenzeka ukuba ubhale imiyalezo, usasaze ividiyo kwi-webcam yakho kuye wonke umntu. Indawo ye-runetka ayichazwanga njengoko ngaphandle kobhaliso. Ukuthandana kuphela kunye nokuncokola namantombazana amahle aneminyaka eli-18 ubudala nangaphezulu. Rhoqo kwingxoxo yethu yevidiyo udibana namantombazana akruqukileyo adiniweyo bubomi bempunga obuzolileyo.
I-chat roulette yinkonzo eluncedo kakhulu. Kwaye elona qhinga liphucukileyo abantu abeza nalo ngalo lonke ixesha lobukho babo ligama elithi "simahla". Kungenxa yoko le nto incoko yasimahla yevidiyo ithandwa kangaka. Kwilizwe ngalinye, zonke izixeko, iilali okanye iilali kukho abafana namantombazana afuna ukwandisa inani labazana nabo, kwaye mhlawumbi nabahlobo. Kwaye iinethiwekhi zentlalo zisandula ukuba ngabancedisi abathandabuzekayo. Ngale nto, incoko yevidiyo yasimahla yenziwe. Siyavuya ukuveza lo mmangaliso. Yenza ukubazana nathi mahala. Unokukhangela izihlobo kwincoko yevidiyo ngaphandle kokuhlawula. Yeyakho kuphela inkonzo yonxibelelwano engaziwayo apho uza kwenza le nto uyifunayo.
Usasazo ngqo lweekhamera zasimahla
Dibana neemodeli ezingahleliwe kwincoko yangoko. Ngokucofa nje ngokulula kwiqhosha, yonwabela ingxoxo yasimahla kunye namantombazana nabafana.
Ingxoxo yevidiyo ebukhoma kunye namantombazana ashushu, ukuba ukhathele kukubona abafana, xa ucofa ngokulandelayo, unokukhetha ukunxibelelana kuphela namantombazana.
Ukusuka kubantu abathandana nabesini esinye ukuya kwisini esinye, incoko yethu yevidiyo yesini gay ibonisa abona bantu batshisayo ubabonileyo nakwesiphi na isiza se-gay kwi-intanethi.
Bukela iiCams eziBukhoma simahla
I-roulette kuphela kwayo ekuvumela ukuba uqhelisele kwi-intanethi ngokusasaza ngqo kwiikhamera zevidiyo. Kuba yindawo yasimahla ngokupheleleyo ukuba kungabikho bhaliso, ungaqala kwangoko incoko yevidiyo kunye namantombazana. Amantombazana amaninzi emhlabeni anokucofa nje kube kanye. Unokufumana kwakhona uninzi lwabafana kumagumbi ethu engxoxo. Senze lula isiza kangangoko unako ukuze ukwazi ukufumana ngokulula amantombazana nabafana usebenzisa ii-webcams ngalo lonke ixesha undwendwela
Uqikelele ukuba, i-roulette yeyona ipholileyo kwi-Intanethi. Into ekufuneka uyenzile kukuvula ikhamera yakho yewebhu ukuze uqhelisele ikhamera. Ngaphandle kobunzima, akukho fom yokubhalisa kwaye akukho ntlawulo ifihliweyo, ii-webcams zabantu abadala zasimahla zilula kakhulu ukuzisebenzisa.
Nazi ezinye izibonelelo zokusebenzisa i-roulette:
Jonga ubungakanani obugcweleyo behamba ze kwikhamera yasimahla
Mahala kunye namantombazana kwikhamera yewebhu kusasazo ngqo
Isisa sethu sifumaneka iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 ngeveki.
Yonwabela simahla iikhamera zabantu abadala ngaphandle kwemali efihliweyo
Sikwenze kwalula kakhulu ukusebenzisa ii-webcam zethu zabantu abadala zasimahla ukuze udibane ngokulula namakhulu amantombazana kwangoko. Ukuba ufuna ukuncokola nabantu ongabaziyo okanye nokuba ufuna ukonwabela incoko yevidiyo yasimahla apho amantombazana nabafana behluba kwaye benze okwenyani ngexesha lokwenyani, i-roulette yile nto uyifunayo. Bhrawuza kwaye ukhethe umsebenzi wekhamera yabantu abadala ohambelana neminqweno yakho; nantoni na oyifunayo, uya kuphuma kwimizuzu embalwa!
Incoko yevidiyo yamantombazana nabafana
Abafana baya konwaba ukudibana namantombazana ababephupha ngawo kuphela. Amanenekazi aya kuyithanda nayo, kuba sinamadoda amaninzi alinde nje ukuba iingcinga zakho zothando ziphile. Sikwanazo neekhamera zasimahla ezenzelwe kuphela abasebenzisi besini, esenza ukuba kube lula kubasebenzisi ukuba bafumane eyona nto bayifunayo.
Ngaba ukhetha ukuhlala nabantu ongabaziyo? Ukuba kunjalo, inqaku lethu lengxoxo liya kukuvumela ukuba ufumane umdlalo ongacwangciswanga kunye nekhamera yewebhu okanye intombazana yewebhu. Qhubeka ucofe iqhosha u "Okulandelayo" de ufumane ikhamera yewebhu evula ngokwenene. Ngamashumi amawaka abasebenzisi be-Intanethi, uya kuhlala ufumana umntu oncokola naye okanye onolwalamano naye.
I-roulette ikunika izingxoxo ezikwenza ukuba ube yinxalenye ye-movie egcwele amanyathelo kwaye iphindaphindwe. Ke ulibale ngokubukela imovie rhoqo kwaye ube yinxalenye yenye yazo endaweni yoko. Iyinyani kwaye iyenzeka ngoku; thetha nabantu kwikhamera yewebhu kwaye ulawule ngokwakho ukukhula. Awunokwazi ukuba kuza kwenzeka ntoni emva koko.
Le ndawo yeyabantu abadala abayi-18 + kuphela!
KUFUNEKA UBE KWIMINYAKA ENGAPHEZULU KWI-18 KUNYE KUFUNEKA UVUMELANE NAKWIMIQATHANGO NGEZANTSI:
Le webhusayithi iqulethe ulwazi, amakhonkco, imifanekiso kunye neevidiyo zomxholo (ngokudibeneyo "uMxholo weMxholo"). Sukuqhubeka: iyakukhathaza; okanye (iii) ukubukela umxholo akuvumelekanga kuluntu lonke apho ukhetha ukuwubukela khona.
Ukuba ukhetha ukufikelela kule ndawo, uyafunga kwaye uyasiqonda isohlwayo sobuxoki ngokuhambelana ne-28 USC § 1746 kunye neminye imithetho nemimiselo esebenzayo, apho zonke ezi ngxelo zilandelayo ziyinyani kwaye zichanekile:
Ndifikelele kubudala besininzi kulawulo lwam;
Izinto zendalo endizibukeleyo zezam zokuzisebenzisa, kwaye andizukuveza bantwana ukuba bajonge le nto;
Ndifuna ukufumana / ukujonga imathiriyeli yomxholo;
Ndiyakholelwa ukuba njengomntu omdala lilungelo lam elingenakulinganiswa lomgaqo-siseko ukufumana / ukujonga umxholo wezinto;
Ndiyakholelwa ukuba ukwabelana ngesondo phakathi kwabantu abadala abavumelaniyo akuyonto ikhubekisayo okanye amanyala;
Ukujonga, ukufunda nokukhuphela umxholo wolu hlobo akophuli imigangatho yalo naluphi na uluntu, isixeko, idolophu, ilizwe okanye ilizwe apho ndiza kuthi ndibone, ndifunde kunye / okanye ndikhuphele umxholo;
Ndinoxanduva lwalo naluphi na ulwazi olungelulo okanye iziphumo zomthetho zokujonga, ukufunda okanye ukukhuphela nayiphi na into evela kule ndawo. Ndiyavuma kwakhona ukuba le webhusayithi okanye abantu bayo abayi kuthwala uxanduva lwazo naziphi na iziphumo ezisemthethweni ezivela kulo naliphi na inkohliso elingene okanye lisetyenziswe kule webhusayithi;
Ndiyaqonda ukuba ukusebenzisa kwam le webhusayithi kulawulwa yimigaqo nemiqathango yewebhusayithi endiyijongileyo ndaza ndayamkela, kwaye ndiyavuma ukubanjwa yile Migaqo.
Ndiyavuma ukuba ngokungena kule webhusayithi, ndiyazibhenca kunye nalo naliphi na iziko endinalo kuwo nawuphi na umdla osemthethweni okanye olinganayo kulawulo lwam kuRhulumente waseFlorida, eMiami-Dade County ukuba kukho nakuphi na ukungavisisani okwenzeka nangaliphi na ixesha phakathi kwale webhusayithi, mna kunye / okanye naliphi na elinye iziko lorhwebo;
Eli phepha lesilumkiso lisisivumelwano esisibophelelayo phakathi kwam, le webhusayithi kunye / okanye naliphi na ishishini endinalo umdla osemthethweni nolungileyo. Ukuba ngaba nasiphi na isibonelelo sesi siVumelwano sibanjwa singenakunyanzeliswa, eshiyekileyo siyakunyanzeliswa ngokupheleleyo kangangoko kunokwenzeka, kwaye isibonelelo esinganyanzelisiyo siya kuthathwa njengesilungiso kubungakanani obulinganiselweyo obuyimfuneko ukuze kuqinisekiswe ukusetyenziswa kwaso ngendlela esondeleleneyo nenjongo ebekiweyo. Nantsi.
Bonke abadlali beqonga kule ndawo baneminyaka engaphezulu kwe-18 ubudala, bavumile ukufotwa kunye / okanye ukufotwa, kwaye bakholelwa kwelokuba lilungelo labo ukubandakanyeka kwezokwabelana ngesondo ngokuzonwabisa kunye nemfundo yabanye abantu abadala, kwaye ndiyakholelwa ukuba yeyam ilungelo lokuba ngumntu omdala ukuba ajonge emva kwezenzo ezinjalo;
Iividiyo kunye nemifanekiso kule ndawo yenzelwe ukuba isetyenziswe ngabantu abadala abanoxanduva njengezincedisi, imfundo kunye nokuzonwabisa;
Ndiyaqonda ukuba lityala lolwaphulo-mthetho ukufaka isibhengezo sobuxoki phantsi kwesikhalazo sobuxoki; njengo
Ndiyavuma ukuba esi sivumelwano silawulwa nguMthetho woTyikityo loTyikityo lwe-elektroniki lweLizwe kunye neLizwe (esaziwa njenge “Umthetho woTyikityo lwe-Elektroniki), i-15 USC. § 7000, ukuya phambili, kwaye ngokukhetha "ndiyavuma. Ngena apha "kwaye ngokubonisa imvume yam ukuba ndibotshelelwe yimigaqo yesi sivumelwano, ndiyavuma ukuba utyikityo olungezantsi lutyikityo lwam buqu kwaye lubonakalisa ukuvuma kwam ukuba kuya kubanjwa yimigaqo yesi sivumelwano.
LE SAYITI IYASEBENZISANA KUNYE NOKUNYANZELISWA KOMTHETHO PHANTSI KWAZO ZONKE IIMEKO ZOKUQINISEKISWA KOKUSETYENZISWA KWEENKONZO OKUNGEKHO MTHETHWENI, NGOKUQHELEKILEYO KWIXESHA LOKUSETYENZISWA KWEENKONZO NGABANTWANA.
Uyigcina njani ividiyo kwincoko yeeroulette
Ukuthandana kwiroulette yencoko kwahluka ngeendlela ezininzi kwezinye iisayithi ezifanayo. Umzekelo, kuya kufuneka ubhalise kwi-Skype. Unxibelelwano nomntu luya kufumaneka kuphela emva kokuba umfakile kuluhlu lwakho lwabafowunelwa. Ukuba kwinethiwekhi yoluntu kuyakunyanzela ukuba ugcwalise iphepha lemibuzo elithile kwaye ugunyaze ukusebenzisa inombolo yefowuni okanye i-imeyile. I-chat roulette yahluke ngokupheleleyo kule ndlela yonxibelelwano, kuba ukubhaliswa akufuneki ukuba uqhelane nenkonzo.
Kuba incoko yevidiyo ikhethwe ngamawaka abantu kwihlabathi liphela, sinokuthi ngokuthandwa kwesiza. Ngenxa yoko, abasebenzisi banokufuna ukuthatha ixesha lonxibelelwano. Ezona hangout ziqaqambileyo, nezilibalekayo ziya kukhunjulwa xa usazi ukubagcina.
Ukongeza ekubeni nako ukurekhoda incoko nomntu olungileyo, kwaye uphinde ubuye, zininzi izizathu zokuba kutheni kufuneka uyazi ukuba uyigcina njani ividiyo. Umzekelo, kukho iimeko eziqhelekileyo zokuqhelana nabantu abaneengxaki zengqondo. Banokusongela, bazame ukukucenga ukuba wenze into engathandekiyo. Ngobungqina bokuziphatha okungalunganga, ungangenisa irekhodi lenkxaso. Kule meko, ikhefu liya kuthunyelwa kwisibhengezo.
Kwakhona, iividiyo ezinomdla zinokuposwa kwinethiwekhi yoluntu okanye kwiYouTube. Namhlanje, iisayithi ezininzi zizaliswe ziividiyo ezihlekisayo okanye ezichukumisayo. Akukho mfihlo yokuba abantu bafumana imali elungileyo yokuthumela iividiyo. Izimvo ezininzi onazo, kokukhona umvuzo wakho uya kuba phezulu.
I-algorithm yokurekhoda ividiyo
Kunokubonakala kwangoko ukuba ukwenza ividiyo erekhodiweyo yencoko kunzima kakhulu. Nangona kunjalo, nokuba ngumfundi ongenamava unokujamelana nale nto, ukuba uyazi iodolo. Ingaba ufuna ntoni:
Yiya kwiwebhu kwi-laptop okanye kwikhompyuter, okanye ukhuphele usetyenziso kwifowuni yakho ephathekayo.
Qwalasela ikhamera yakho yewebhu kunye nemakrofoni ukuze i-roulette yengxoxo isebenze ngokuchanekileyo. Ngaphandle kwezi zixhobo, inkqubo ayizukuqala, kwaye ukurekhodwa kwevidiyo akunakusebenza.
Fumana ukhuphele inkqubo yokurekhoda ividiyo ngesandi esivela kwi-Intanethi. I-Ashampoo Snap, iSpring Free Cam, iCamStudio kunye nezinye ziya kukusebenzela.
Qiniseka ukuba kukho indawo yasimahla kwikhompyuter yakho yokugcina ifayile. Ubuncinci be-1-2 GB iyafuneka.
Ngelixa uncokola ngevidiyo, yazisa inkqubo kwaye uqalise ukurekhoda ividiyo.
Unokuyeka ukurekhoda nanini na. Ubungakanani befayile buya kuxhomekeka kwisisombululo sekhamera yewebhu kunye nexesha lokufowuna.